Nilamindamina ny raharaha Arnaud Miandry taom-pilalaovana iray vao afa-mifindra
Niravona ny olana teo amin’ny klioban'ny Ajesaia sy ny Cnaps manoloana ilay fifanolanana sy adihevitra,
ka tsy nahafahan-dRandrianantenaina Arnaud nilalao tany amin’ny Klioban’i Grenoble Foot 38. Niezaka nandamina ity raharaha Arnaud ity ny avy amin’ny minisiteran’ny fanatanjahantena izay nosoloan-dRamatoa Rosà Rakotozafy Tale jeneralin’ny fanatanjahantena tena. Tapaka ary samy nankatoavin'ireo klioba 2 tonta fa miverina mpilalao ao amin’ny CNaPS Sport i Arnaud amin'ity taom-pilalaovana ity. Raha misy ny fifindrana klioba ataony dia tsy maintsy ireo klioba 3 (FC AZ, Ajesaia, Cnaps) no miaraka manapaka fa tsy klioba tokana. Atao eo anivon'ny tompon'andraikitry 'ny Federasionina Malagasy (FMF) ny fifanarahana rehefa ho tonga ny fifindrana klioba. Nifarana ny 31 janoary teo moa ny tsenan’ny fifindrana mpilalao na ny “Mercato” any Eoropa, ka tsy maintsy miandry fahavitan’ny taom-pilalaovana indray. Azo natao ihany izany ny nifampiresaka sy nifandamina. Zava-dehibe ny fivahan’ny olana saingy toa efa tara loatra ihany na izany aza satria raha mba tena nitsinjo hatrany am-boalohany an’i Arnaud ireo tompon’andraikitra mahefa isan-tsokajiny tsy ho tahaka izao no miseho fa ny tsaratsara kokoa.